BA-SHAR IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Ba-Shar Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Basset Hound / Chinese Shar-Pei Yakasanganiswa Imbwa Dzembudzi
'Iyi ndiyo yedu Bassett / Shar-Pei musanganiswa, Jed. Iye angave makore matatu ezera uye makumi mashanu emapaunzi. Jed imbwa ine rudo uye dzimwe nguva yakasindimara. Iye akangwara kwazvo uye anoita mushe mumakirasi ake ekudzidzisa. Isu takamununura kubva kune pekugara 1 gore rapfuura. Anoda famba famba uye tamba nematoyi ake. Anowirirana zvikuru neimwe imbwa yedu, Lucas ( Great Dane ). '
Ba-Shar haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Basset Hound uye iyo Shar-pei . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwerudzi rwakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
American Canine Mbeu dzakauchikwa Club = Ba-Shar
Dhizaini Imbwa Kennel Kirabhu = Ba-Shar
Mbutu nhema Ba-Shar mbwanana pamasvondo matanhatu ekuberekwa (Basset Hound / Chinese Shar-Pei sanganisa rudzi rwembwa)
Ba-Shar vana vane mavhiki matanhatu (Basset Hound / Chinese Shar-Pei sanganisa imbwa dzinoberekesa)
Ba-Shar puppy pamasvondo matanhatu ekuberekwa (Basset Hound / Chinese Shar-Pei imbwa yakasanganiswa)
belgian malinois dema uye tan
Jed iyo Basset / Shar-Pei musanganiswa (Ba-Shar) pazera ramakore matatu
doberman pinscher german mufudzi musanganiswa
'Bella iyo Basset Hound / Shar-Pei musanganiswa (Ba-Shar) aine makore maviri ekuberekwa - iyo misono iri kubva pakuvhiyiwa kweziso rake, iro raenda chaizvo!'
'Buddy iyo Basset Hound / Shar-Pei musanganiswa (Ba-Shar) aine makore manomwe ekuberekwa - anofarira kudya nyuchi!'
Varidzi vaviri vane mana Shar-Pei / Bassets: Jamey (munhu), Angus (5), Abby (5), Bella (2), Buddy (7), uye Tom (mumwe munhu!). Unogona kungoona rurimi rwebhuruu raAngus. Kutora foto iri raive rakafanana nekufudza katsi - munhu wese aida kutarisa nenzira dzakasiyana kamwechete! '
Arthur Basset / Shar-Pei musanganiswa (Walrus imbwa) pazera regore - 'Sangana naArthur walrus (Shar Pei / Basset). Anoda kuisa uta hwake tai uye akarova iyo imbwa paki. Zvingave zvakanaka kana iye naBella vakwanisa kuenda pane zuva :) '
'Arthur nekuwedzera kwedu kutsva Annie mwana weWalrus!'
pit bull inosanganiswa nebhokisi
Arthur Basset / Shar-Pei musanganiswa (Walrus imbwa) pazera regore
Arthur Basset / Shar-Pei musanganiswa (Walrus imbwa) sembwanana padhuze nepanda bheya rakazara zvinhu.
Angus Basset / Shar-Pei musanganiswa (Ba-Shar) pazera remwedzi gumi nemana- 'Munhu wese anogara achindimisa kuti ndibvunze kuti ndewerudzii iye haasi iye chete anoratidza-kumisa asi iye akangwara-akangwara.'
Uyu ndiAbby, munin'ina waAngus. Muridzi wake anoti, 'Iye, sezvaari, zvakare ari Shar-Pei / Basset musanganiswa. Idzi imbwa dzakangwara, dzinodakadza, uye dzine pfungwa huru yekuseka. Vanogona kunge vakasindimara dzimwe nguva, senge paunenge uchiedza kuvamisa kudzingirira tsuro! Ndinoshuva kuti rudzi urwu runogona kuitwa 'rwepamutemo' — idzo shamwari dzinoshamisa, uye saizi yakakura, kwete diki kwazvo, isina kunyanya kukura. Range iri 31-40 mapaundi. Abby anofunga kuti ndiRabhani, uye anoita senge! '
Abby iyo Basset Hound / Shar-Pei musanganiswa (Ba-Shar)
Angus iyo Basset / Shar-Pei musanganiswa (Ba-Shar) pamwedzi gumi nemana
Angus iyo Basset / Shar-Pei musanganiswa (Ba-Shar) mbwanana pamasvondo masere ekuberekwa
makore maviri wechigerman mufudzi
'Angus naAbby (ivo vaviri Ba-Shars) vaive pamwechete pakushanya kwevhiki. Isu takatora mufananidzo wevaviri, mukoma nemunin'ina vese vakura! Ndinovimba unonakidzwa nekukura kwavari kuita-ivo vava 2 1/2 yemakore ekuberekwa, uye vakazara nekunakidzwa nesimba! (Angus ari kuruboshwe, Abby ari kurudyi.) '
Max, musanganiswa weChinese Shar-Pei uye Basset Hound (Ba-Shar) sediki mwana wembwa tambo toyi
Max, musanganiswa weChinese Shar-Pei uye Basset Hound (Ba-Shar) sediki mwana wembwanana
Mr Darcy iyo Shar-Pei x Basset Hound (Ba-Shar) mbwanana pamasvondo mapfumbamwe ekuberekwa- Amai vake tricolor Basset Hound uye baba vake lilac Shar-Pei. Parizvino ane makumbo mapfupi nemapendekete akafara seBasset. Iye akareba zvishoma mumuviri, asi kwete zvakanyanya. Iye ane chaiwo akajairwa Shar-Pei kumeso nemaziso, tomu uye nzeve zvese zvakajairwa zveShar-Pei. Anogara kuti adye (zvakanyanya seBasset Hound yangu!) Asi akakurumidza kudzidziswa dzimba (kusiyana neBasset asi zvakanyanya senge kushambidzika kweShar-Pei!) '
Mwanasikana wamambo Ba-Shar puppy (Basset Hound / Shar-Pei hybrid) angangoita mavhiki gumi nematatu ekuberekwa- 'Anoda kunyudza matinji ake akapinza mune chero chinhu chaanogona kubata. Izvi zvinosanganisira makumbo emunhu wese anoswedera. '
Princess the Ba-Shar mbwanana (Basset Hound / Shar-Pei musanganiswa rudzi) angangoita gumi nemaviri masvondo ekuratidzira rurimi rwake rutema
Bailey iyo Ba-Shar (Basset Hound / Shar-Pei musanganiswa rudzi) mbwanana pamasvondo gumi nemaviri ekuberekwa- 'Pese patinoenda kupaki imbwa kana vanhu vatatu vanondibvunza kuti imbwa rudzii. Iye ane rudo, anoda kuziva, uye anoda kudzingirira imbwa dzichidzingirira tenesi mabhora. Ini handikwanise kumunyengerera kuti atandanise yake tenesi bhora asi iye anoda kudzingirira dzimwe imbwa. Zvakatora nguva asi iye pakupedzisira akura mumuviri wake uye zvishoma mumusoro wake. '
'Bailey Ba-Shar achirwisa ngamera yake, iyo yaakarwa nayo kwenguva yakareba, akabvarura huro yake. Pandakaenda naye kuPetSmart kunotora toy iye akanhonga toyi yakaenzana neyake uye ikozvino isu tinongoitsiva neimwe nyowani yaanoda. '
'Bailey the Ba-shar hybrid ane makore maviri ekuberekwa, achirema 35 mapaundi-zvinoita sekunge arikugara saizi iyoyo.'
Ba-Shar Mifananidzo 1
Chinyorwa cheChinese Shar-Pei Sanganisa Imbwa Dzemboro
Chinyorwa cheBasset Hound Sanganisa Imbwa Dzakaberekwa
mini yakakura swiss gomo imbwa
wetsiva akasanganiswa negoridhe retriever
yorkie poo nhema uye chena
rakakura dane shava nematema matema
Cavalier mambo charles papillon musanganiswa